ကျနော် မြန်မာနိုင်ငံက ကားစီးသူတွေကြားထဲမှာ Engine Check Light (ချက်မီး) နဲ့ပတ်သက်ရင် လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆလေးတွေ ရှိပါတယ် ။ ကားဂရုတော်တော်များများထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က “ကျနော့်ကားလေး အင်ဂျင်ချက်မီးလေး လင်းနေတယ်၊ ဘာဖြစ်တာလဲမသိလို့” မေးလိုက်ရင် ဝိုင်းဖြေကြတဲ့ အဖြေတော်တော်များများကိုကြည့်ရင် ချက်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့အယူအဆလေးတွေကို အများကြီးမြင်တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ အင်ဂျင်ချက်မီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့၊ လိုအပ်နေတဲ့ အချက်လေးတွေကို ကျနော်ဆွေးနွေးတင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီးရင် အင်ဂျင်ချက်မီး ဘာကြောင့်လင်းလာရတယ်၊ အင်ဂျင်ချက်မီးလင်းလာရင် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလေးကို တစ်ခါတည်းနားလည်သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Engine Check Light (ချက်မီး) ဆိုတာဘာလဲ ?
Engine Check Light ဆိုတာ1980ခုနှစ် အစောပိုင်းကားတွေမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ Computerized Control (ကွန်ပျူတာ ထိန်းချုပ်စနစ်) အသုံးပြု ကိုယ်တိုင်ပြစ်ချက်ရှာဖွေတဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတော့ ဒီလို Engine Check Light လို့လည်းခေါ်သလို MIL (Malfunction Indicator Lamp) လို့ခေါ်တယ်ဗျ။ MIL (Malfunction Indicator Lamp) ဆိုတဲ့အတိုင်း ကားမှာတပ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ်က ကိုယ်တိုင်သတိထားမိပြီး ကားမောင်းသူကို သတိပေးဖို့ ဒီလို Check Light လေး လင်းပေးတော့တာပါပဲ။
ဟိုးအရင် 1980ခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့ ဒီ MIL (or) Check Light တွေက ကားမှာပါတဲ့ စနစ်အစုံနဲ့ သွားသက်ဆိုင်နေပါပြီ၊ ကားမှာပါတဲ့ ဘာစနစ်ပဲ ချို့ယွင်း ချို့ယွင်း ဒီမီးလင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ အခုခေတ်လို ကား Alternator (ဒိုင်နမို-အရပ်ခေါ်) ကအားမဝင်တော့ရင် အခုခေတ်ကားတွေလို Battery ပုံစံမလင်းဘဲ ချက်မီးပဲ လင်းပါတယ်) ။ ဒီတော့ အဲဒီအချိန် ကားပြုပြင်သူတွေအတွက် ပြစ်ချက်ရှာဖွေ ပြုပြင်ဖို့ ရှုပ်ထွေးစေပါတယ် ။
OBD 1 စနစ် ဆိုတာဘာလဲ ?
1990 နောက်ပိုင်းမှာတော့ OBD 1 (On- Board Diagnostic 1) ဆိုတာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ OBD 1 ဆိုတာကလည်း ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ ကားမှာပါတဲ့ စနစ်တစ်ခုခုချို့ယွင်းပြီဆိုရင် သူ့အလိုလို ပြစ်ချက် ရှာပေးတဲ့ စနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ ဒီလို ခေတ်ဟောင်း OBD 1 စနစ်သုံးကားတွေ Check Light လင်းလာပြီဆိုရင် OBD 1 Port လေးမှာ ဝါယာကြိုးလေးနဲ့ ခွပြီး ၊ Engine Check မီး အပိတ်အဖွင့် အချက်ရေအတွက်ကို ဖတ်ပြီး ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေကို ရှာဖွေကြပါတယ်။ မော်ဒယ်နိမ့်တဲ့ Hilux Surf တို့ Toyota Corolla တို့မှာ ဒီလို OBD 1စနစ်သုံး Port လေးတွေ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ။ အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါ ။
ဒီ OBD 1 စနစ်လေးမှာလည်း Check Light တွေဟာ ကားမှာပါတဲ့ အခြားစနစ်တွေနဲ့ ရောထွေးနေပါသေးတယ်။ ဒီတော့ Check Light လေးရဲ့ အလင်းအမှိတ် အချက်ရေတွေကို မှတ်သားပြီး ပြစ်ချက်ရှာဖွေရတာတွေဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
OBD 2စနစ်ဆိုတာဘာလဲ ?
OBD2(On-Board Diagnostic 2) ဆိုတာကတော့ 1995/1996နောက်ပိုင်းလောက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ OBD 1 စနစ်ကို အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်သုံး ကိုယ်တိုင်ပြစ်ချက်ရှာဖွေတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကတော့ အခုလက်ရှိ 2020ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ကားတွေမှာ အသုံးပြုနေဆဲ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး OBD 1စနစ်လို ဝါယာကြိုးခွဆက် Jumper ထောက် ၊ ချက်မီး အပိတ်အဖွင့် အရေအတွက်တွေကို မှတ်စရာမလိုတော့ဘဲ ၊ OBD2Port တွေမှာ Diagnostic Scanner တွေကို ချိတ်ဆက်ပြီး ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေကို ရှာဖွေဖတ်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
OBD2စနစ်မှာ ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားလဲ
1996 နောက်ပိုင်းကနေ ယနေ့ချိန်အထိ ကားတွေရဲ့ နည်းပညာတွေ ၊ ကားမှာသုံးတဲ့ စနစ်တွေဟာ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ အမျိုးမျိုးတိုးတက်လာမို့ ၊ ဒီလို စနစ်မျိုးစုံကို ပြစ်ချက်ရှာဖွေဖို့အတွက် ဒီ OBD2စနစ်မှာတော့ ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေကို အသေးစိတ်ထပ်မံခွဲခြားလိုက်ပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့် ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေကို (၄) မျိုးခွဲခြားလိုက်ပါတယ်။
1. Power Train System (P)
2. Body System (B)
3. Chassis System (C)
4. Network Communication System (U) ဆိုပြီး အခြေခံအားဖြင့် ခွဲခြားလိုက်ပါတယ် ။
အဲ့လိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အတွက် Engine Check Light ဆိုတဲ့ Check မီးဟာ ဘယ်အချိန်မှာ လင်းတာများသလဲဆို ရင် Power Train System (P) ဆိုတဲ့ ကားပါဝါ စွမ်းအင်ကို အဓိကပေးတဲ့ Engine နဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ချို့ယွင်းတဲ့ အခါရယ် ၊ နောက် ဂီယာဘောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ချို့ယွင်းတဲ့အခါရယ် Engine Check Light လင်းလာပါတယ် ။ ဒီလို ချက်မီးလင်းလာလို့ Scanner တွေနဲ့ Error Code လို ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ (P) နဲ့ စတဲ့ Error Code တွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး သူ့နောက်က ဂဏန်းတွေကတော့ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာကို ရည်ညွှန်းတဲ့ ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။
ယေဘူယျအားဖြင့် Engine ရယ် Gear Box ရယ် အစရှိတဲ့ Powertrain စနစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြစ်ချက်တွေ ၊ ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိလာရင်သာ Engine ချက်မီးလာနိုင်ပြီး ၊ အခြား စနစ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Error တွေတက်လာရင် ချက်မီးလင်းတာ ရှားပြီး အခြားအချက်ပြ သင်္ကေတတွေပဲ ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာ ABS , Parking Brake , Air Bag အစရှိသဖြင့် ။
ဒီတော့ ချက်မီးလို့ခေါ်တဲ့ Engine Check Light ဘာလို့လင်းလာရသလဲဆိုရင် ကားမှာပါတဲ့ အင်ဂျင်နဲ့ Gear Box နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပြစ်ချက်ကြောင့်ဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့် သိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ ဒီနေ့ခေတ် ကားတွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်ဆိုင်ရာ Sensor တွေ ၊ Actuator တွေ ၊ ဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေဟာ အလွန်ပဲများပြားလှပါတယ် ။ အဲ့လိုအများကြီးထဲက ပစ္စည်းတစ်ခုခုချို့ယွင်းတိုင်း စနစ်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းတိုင်း Engine Check မီးလင်းလာမှာပါ ။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာလေးက Engine Check Light လင်းလာရင် ကားဂရုတွေထဲမှာ
“Check Light” ဘာလို့လင်းတာလဲဆိုပြီး သွားမေးတဲ့အခါ ၊ အပြင်မှာ အလွတ်တမ်းမေးတဲ့အခါ အဖြေတွေ အမျိုးမျိုးပြောတတ်ကြပါတယ် ။
အဲဒီအဖြေတွေကိုကြည့်ပြီး ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် မှတ်သားမယ်ဆိုရင် လွဲမှားဖို့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် အဖြေပေးတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ကားတွေမှာ Engine Check Light ပေါ်လာတဲ့အခါ ကြုံဖူးကြတဲ့ ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေကို အသေမှတ်ပြီး Engine Check Light လင်းတာ ဒါကြောင့်လို့ အသေမှတ် ထားတတ်ကြလို့ပါပဲ။
ဥပမာ - Oxygen Sensor မကောင်းလို့ Engine Check Light လင်းတယ် ၊ အဲ့ဒါလဲလိုက်တော့ ကားကောင်းသွားတယ် ၊ အဲ့တော့ Engine Check Light လင်းလာတိုင်း Oxygen Sensor လဲရမယ်လို့ ပြောနေတဲ့ သူတွေရှိတတ်ပါတယ် ။ ကျောက်ဇကာမကောင်းလို့ Check မီးလင်းတာကြုံဖူးတဲ့သူကလည်း ကျောက်ဇကာကြောင့်ဆိုပြီး တထစ်ချ စွဲမှတ်ထားတတ်ပါတယ် ၊ တချို့ဆို ဒါမှဒါဆိုပြီး ငြင်းတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်က O2 Sensor မကောင်းတာ၊ ကျောက်ဇကာမကောင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို အခြား ပြစ်ချက် ပေါင်းများစွာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ Engine Check Light လင်းစေတဲ့ ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေက ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ၊ မော်ဒယ်အမျိုးအစား ၊ ကားအမျိုးအစား တွေကို လိုက်ပြီး ပြစ်ချက်ကုဒ် ရာနဲ့ထောင်နဲ့ ချီပြီးရှိပါတယ် ။ ပြစ်ချက်ကုဒ် ၁ မျိုးထပ်ပိုပြီး ၂ မျိုး ၃ မျိုး အတွဲလိုက် ချို့ယွင်းတာကြောင့် Check Light လင်းလာတာမျိုး လည်းရှိတတ်ပါတယ် ။
ဒီတော့ ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေကို Scanner တွေနဲ့ စစ်ဆေးမကြည့်ဘဲ Check Light လင်းတာဟာ ဘာကြောင့်ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ ဘယ်ပညာရှင်မှ တထစ်ချ ကြိမ်းသေ မပြောနိုင်ပါဘူး ။ ပြောခဲ့ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာ ၊ အဖြစ် တတ်ဆုံး အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါမယ် ။ (Check မီးလင်းတိုင်း ဒါကြောင့်လို့ တထစ်ချ စွဲမှတ်လို့မရပါဘူး ) ။
ဒီတော့ မိတ်ဆွေတို့ ကားတွေမှာ ချက်မီး (Check Light) လင်းရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ ခေတ်မီ Diagnostic Scanner တွေကို အသုံးပြုတဲ့ Workshop တွေ ၊ Service Centre တွေမှာ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ၊ ပြစ်ချက်ကုဒ်ကို ဖတ်ရှုပြီးမှ တကယ့်ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ ၊ ချို့ယွင်းနေတဲ့ အပိုင်းတွေကို ရှာဖွေပြုပြင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါမှလည်း ငွေကုန်ကြေးကျ အနည်းဆုံးနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း ပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
အဖြစ်များဆုံး (အဖြစ်များဆုံး) Check Light လင်းစေတဲ့ ပြဿနာတွေကတော့
1. Oxygen Sensor တွေမကောင်းတာ
2. Catalytic Converter ဆိုတဲ့ ကျောက်ဆန်ကာတွေ မကောင်းတာ
3. Mass Air Flow (MAF) Sensor တွေ ပျက်စီးတာ
4. Spark Plug , Spark Plug Coil , Wire Line တွေပျက်စီးတာ
5. EGR Valve မကောင်းတာ
6. Engine Coolant Temperature Sensor (ECT Sensor) ပျက်စီးတာ
7. Knock Sensor မကောင်းတာ
8. Throttle Body လို့ခေါ်တဲ့ လေတံခါး မကောင်းတာ
9. Fuel Injector တွေ ပျက်စီးတာ
10. System Too Lean / Rich ( ဆီလေ အချိုးမညီမျှတာ )
11. Mis Fire (မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ် မမှန်တာ)
အစရှိတဲ့ ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ ကားလောကမှာ ကြုံတွေ့ရ အများဆုံး Engine Check Light လင်းစေတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါတွေဖြစ်မယ်လို့ တထစ်ချ မှတ်ယူလို့မရပါဘူး ။ ခေတ်မီ Diagnostic Scan Tool တွေနဲ့ စစ်ဆေးပြီး ပြစ်ချက်ကုဒ်တွေကို ဖတ်ရှုပြီးမှသာ ဘယ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် Check မီးလင်းလာတယ်ဆိုရင် ခေတ်မီ Workshop တွေနဲ့ Service တွေမှာ အမြန်ဆုံးသွားရောက် စစ်ဆေးပြုပြင်တာဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခမျာ ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီကို မောင်နှမများအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေခမျာ ။
မန္တလေး ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်